NISA oo 'qabatay' walxo qaraxyada laga sameeyo oo u socday Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
NISA oo ‘qabatay’ walxo qaraxyada laga sameeyo oo u socday Al-Shabaab
Warkan ayay NISA kusoo beegtay xili dalka maanta uu xusayo sanad-guuraddii 3aad ee qaraxii Zoobe, kaasoo ay ku dhineen shacab badan oo Soomaaliyeed.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hay'adda Nabad Sugida iyo Siroonka Soomaaliya ee NISA ayaa bogga ay ku leedahay Twitter-ka kusoo qortay maanta in la qabtay maadooyiin qaraxyada laga sameeyo iyo shaqsiyaadkii wadey.
"Waxaa gacanta lagu dhigay 79, Tan oo maadada “Sulfuric Acid”ah & Shakhsiyaadkii dalka soo galiyey, una gudbinayey Maafiyada Alshabaab, waxayna wajihi doonaan Sharciga. Baaritaanka Maadadan waxaa ka wada shaqaynaya NISA & Hey’adaha ay iska kaashadaan ladagaalanka Aragagixisada," ayaa lagu yiri qoraalka NISA.
NISA ma aysan sheegin halka lagu qabtay iyo tirada dadka la hayo, iyadoo warkan uu kusoo beegmayo xili maanta la xusayo sanad-guuradii 3aad qaraxii Zoobe oo ay ku dhinteen in ka badan 632 qof.
0 Comments Topics: al-shabaab nisa qarax zoobe
Kahor inta aan warbaahinta Qaranka lagu shaacin geerida Ikraan Khamiistii, Fahad Yaasiin ayaa isaga cararay Magaaladda Muqdisho, isagoo ka baqaya in la xiro.
Qaali: Doorasho ma dhici doonto illaa la soo daayo Ikraan Tahliil
Warar 28 August 2021 18:54
Warbixin 24 August 2021 14:56